Uhlaziyo luya kukhutshwa ukulungisa ukubengezela kwescreen se-OnePlus 6 | I-Androidsis
Kutshanje sikuxelele malunga neengxaki abanye abasebenzisi abahlangabezana nazo kwi-OnePlus 6. Emva kohlaziyo lwe-OxygenOS, kukho abasebenzisi abaneengxaki ngokuqaqamba okuzenzekelayo. Into ephela ibangela ukuba kudanyaze kwiscreen. Le asiyongxaki enkulu, kodwa iyacaphukisa kakhulu kubasebenzisi abayifumanayo.
Nangona kunjalo Awuyi kulinda ixesha elide kude kufike isisombululo kwi-OnePlus 6 yakho. Kuba umenzi ngokwakhe ufuna ukunxibelelana kuba basebenza kuhlaziyo olutsha oluya kuphelisa ezi ngxaki kwisixhobo, kwaye ayizukuthatha thuba lide ukufika.
I-OnePlus ikhuphe ingxelo kwiwebhusayithi yayo, apho bathetha khona ngale ngxaki kwiscreen esiphezulu. Bathetha ukuba uhlaziyo luza kufika nge-OTA kungekudala kuyo yonke i-OnePlus 6. Ndiyabulela kuyo, le ngxaki kufuneka isonjululwe ngokupheleleyo kwaye ifowuni isebenza ngokwesiqhelo kwakhona.
Kodwa Okwangoku akukho mihla inikiweyo yokuphehlelelwa kolu hlaziyo. Inkampani sele igqibezela iinkcukacha zokuphehlelelwa kwayo, kwaye yonke into icebisa ukuba izakufika nge-Android yokhuseleko kwinyanga ka-Agasti. Ke kubonakala ngathi akufuneki ulinde ixesha elide.
Nangona kunyanzelekile ukuba ulinde de inkampani ngokwayo inike ulwazi ngakumbi kubasebenzisi abane-OnePlus 6 echaphazeleka koku kungqubana kwiscreen. Inxalenye elungileyo yile yingxaki esonjululwa ngendlela elula ngohlaziyo olutsha lwe-OxygenOS.
Ukuza kuthi ga ngoku ibingomnye wabambalwa, ukuba ayinguye yedwa, ingxaki abanye abasebenzisi babenayo kunye ne-OnePlus 6. engalunganga kwaphela, kwaye inceda ukubonisa ukuba ifemu ngumenzi weemodeli ezinokuthenjwa. Ingakumbi imodeli ethengisa kunye nale.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OnePlus » I-OnePlus 6 iya kulungisa iingxaki zescreen sakho kuhlaziyo lwayo olulandelayo
Rocio baamontes gijon sitsho
Ndifuna iselfowuni, andinaselfowuni
Phendula Rocio baamontes gijon